Maxaan ka ognahay saraakiisha CQS ee ka dagaallamaya Guriceel? | KEYDMEDIA ONLINE
8 December 2021 Doorasho boob, xaraash, laaluush iyo awood sheegasho ah
8 December 2021 Soomaaliya oo wajahaysa xaalad bini’aadannimo oo halis ah
8 December 2021 Nidaamka Caddaalada Soomaaliya oo meel xun maraya
8 December 2021 Tartan Kubada Cagta oo Muqdisho ka socda
8 December 2021 Shacabka Laascaanood oo diidan kamid ahaanahaha Somaliland
8 December 2021 Weerarada Al-Shabaab ee Jubada Hoose oo isa soo taraya
8 December 2021 Qatar iyo Imaaraadka oo ku hardamaya hanashada Rooble
7 December 2021 Farmaajo xitaa waa ka fuqi diiday kaalintiisa musuqa - FIQI
7 December 2021 Khadiija Diiriye oo raacdeysay shaqaalaha reer Puntland
7 December 2021 Cabdi Xaashi oo amray in la hakiyo doorashada 16 kursi
7 December 2021 Kuraas lagu doortey Muqdisho oo ka hakinayo
7 December 2021 Carruur si arxan darro loogu dilay duleedka Muqdisho
7 December 2021 Maxaad ka ogtahay Dhaqan xumada ka socota TiKTok?
7 December 2021 Suuqyadda Caasimadda oo lagu iibinayo daawooyinka dhacay
7 December 2021 Hogaanka Kooxda TPLF: Dagaalka haduu billowday
7 December 2021 Maxaa ka jira Kufsiga la sheegay in Gabdho loogu geysto Villa Somalia?
6 December 2021 Fahad oo kulamo siyaasadeed ka wada xarunta NISA
Maxaan ka ognahay saraakiisha CQS ee ka dagaallamaya Guriceel?
Saraakiil sare oo ka tirsan Ciidanka Xogga Dalka Soomaaliya, ayaa hoggaaminaya dagaalka afarta cisho ka holcaya Guriceel, waxaana halkaas ku geeriyooday saraakiil kale oo muhiim ah oo ka tirsana CQS.
GURICEEL, Soomaaliya – Waxaa maalintii 4-aad galay dagaalka ka holcaya magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud, kaas oo u dhaxeeya Ciidanka Qalabka Sida ee Soomaaliya iyo Kooxda hubeysan ee Ahlu-sunna Waljamaaca, oo 1-dii October 2021, la wareegtay gacan ku heynta xarunta ganacsiga gobolka.
Dagaalkaan, waxaa si weyn kaga qeyb qaatay, ciidamo laga qaaday caasimadda Soomaaliyada oo ay horkacayaan Saraakiisha ugu sareysa CXD. Hadaba maxaan ka naqaanna Saraakiisha ka daggaallameysa Guriceel?.
Brigadier General, Odowaa Yuusuf Raage;
Billowgii bishaan, waxaa garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb ka degay Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka, Odowaa Yuusuf Raage, waana hoggaanka guud ee howl-galka ka dhanka ah Kooxda ay hor-kacayaan Sheekh Shaakir iyo Macallin Maxamuud ee ASWJ.
Raage, 2005-tii ayuu ka mid noqday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, qorashadiisii askarinimo kadib, waxaa dalka Ugandha loogu diray tababar ciidan, gaar ahaan ilaalinta madaxda (VIP protection course). Sanadkii 2009, Odowaa waxaa mar kale loo diray Suudaan si uu u soo qaato tababar Leyli sarkaal, wuxuuna 2010 ka mid noqday Saraakiishii qaabilsanayd ilaalinta Villa Somalia.
2013, Raage waxa loo diray dalka Turkiga, wax yar ka dib markii uu soo laabtay, Odowaa ayaa mar kale dib loogu celiyay Turkiga dhamaadkii 2014-kii, wuxuuna soo qaatay koorsooyin la xariira barashada iyo fahamka mabaadi'da asaasiga ah ee hoggaaminta ciidanka casriga ah.
Markii uu soo dhameystay koorsooyinkii waxa la siiyay darajada Dhamme muddo ka dibna waxaa loo dalacsiiyay darajada Gaashaanle oo uu ku helay abaalmarin ku saabsan howlaha ciidanka. Bilawgii 2018-kii, waxa uu noqday Gaashaanle Dhexe, dhammaadkii 2018-kiina waxa uu noqday ammaan-duuliyaha Ciidanka Lugta ee Xoogga Dalka Soomaaliyeed, waxaana darajadiisa loo badelay Sareeye Guuto. Halka uu 2019-kii noqday Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed.
Odawaa, wuxaa lagu xagliyaa inuu si weyn ugu dhow-yahay Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, waxaana lagu eedeeyay inuu qeyb ka ahaa dadaallo ay kooxda waqtigoodii sharciga ahaa dhamaaday ay bishii April ee sanadkaan ku doonayeen in ay ku hirgaliyaan muddo kordhin labo sano, oo qeyb ka mid ah CXD fashiliyeen.
Farxaan Maxamed Aadan (Qaroole);
Taliyaha Booliska Gobolka Banaadir, Farxaan Maxamed Aadan oo loo yaqaan ‘Farxaan Qaroole’, ayaa isna qeyb ka ah hoggaanka howl-galka. Qaroole, wuxuu soo noqday Taliyaha ciidamada loogu yeero Haramcad, darajada Gaashaanle dhexe, ayaana la siiyay bishii April, kadib markii shaqada laga raacdeeyay Saadaq Joon oo ka hor yimid muddo kordhin sharci darro ahayd.
Farxaan Maxamuud, wuxuu ka mid yahay shakhsiyaadka uu Farmaajo aaminsan yahay in uusan kasoo jeesan shaqadii loo diro, waxa uuna kusoo tijaabiyay dhismihii dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle, dhammaantood wuxuu dhagta ciidda u daray cid kasta ee isku dayday in ay ka hor imaato ama bannaan-bax sameyso.
Farxaan Qaroole, waxaa lagu eedeeyaa inuu horay uga tirsanaa kana soo garab dagaalay rag waa weyn oo ka tirsan Kooxda Al-Shabaab, waxuuna ka mid yahay shaqsiyaad ku eedeysan dad shacab ah oo lagu laayay magaalada Baydhabo xilligii Lafta-gareen loo dooranayay madaxweynaha KGS.
Sidoo kale, wuxuu hore uga dagaal galay Dhuusamareeb, isagoo qoorta ka guray koox daacad u ahayd hoggaanka ASWJ ee ku sugnaa xerada loo yaqaanno INJI. Farmaajo ayaa si indho la’aan ah mudadii uu xilka hayay u dalacsiiyay Saraakiil badan oo Al-Shabaab ahaa, si ay u caburiyaan shacabka Muqdisho.
Maxamuud Xasan Ibraahim (Baakay);
Taliyaha Guutada 5-aada Qeybta 27-aad ee CXDS, Maxamuud Xasan Ibraahim ‘Baakay’. Ayaa dhankiisa qeyb ka ah hoggaanka howl-galka, wuxuuna ciidamo xooggan oo dhulka maray geeyay Guriceel billowgii Isbuucaan.
Taliska Guutada 5-aada Qeybta 27-aad ee CXDS, waxa ay ka howlgalaan gobolka Hiiraan, oo qudhiisu marti galinaya awoodo siyaasadeed oo ka soo horjeeda maamulka Hirshabeelle, sida jabhadda uu hoggaamiyo Generaal Abuukar Xaaji Warsame Xuud.
Mascuud Maxamed Warsame;
Taliyaha Guutada 15-aad Qeybta 21-aad ee CXDS, Mascuud Maxamed Warsame, oo hore uga tirsanaa Saraakiisha Kooxda taabacsan ASWJ, ayaa dhankiisa qeyb ka ah, hoggaanka howl-galka ka socda Guriceel, waana shaqsiga la rumeysan yahay inuu ugu muhiimsan yahay ee saraakiisha dagaalka ku jirta, marka laga hadlayo degaaanka lagu dagaallamayo, maadaama taliska Qeybta 21-aad uu fadhigiisu yahay Galgaduud.
Dagaalkaan galay maalintiisii 4-aad, waxaa ku geeriyooday Allaha u naxariistee Gaashaanle Cabdiladiif Axmed Culusow [Feyfle] Taliyihii Ururka 6-aad, Guutada 16-aad ee Ciidanka Kumaandooska Xoogga Dalka ee Danab.
Sidoo kale, waxaa dagaalkaan ku naf-waayay, AUN, Laba Xiddigle Aadan Ibraahim Aadan oo ahaa Taliyaha Horinta 3aad ee Ururkaas 5aad ee Gorgor, iyo AUN Taliyihii Ciidanka Haramcad Ee degaannada Galmudug Labo Xiddigle, Faarax Muumin iyo Allaha u naxariistee, Taliyihii Garoonka Diyaaradaha Dhuusamareeb ee Ciidanka Nabad-sugidda, Cabdiqani Maxamed Diiriye.
Lacag been ah [False] oo Muqdisho la soo galiyay
Warar 8 December 2021 17:43
Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ayaa qaaday tallaabo ay ku burburinayaan dhaqaalaha Muqdisho, waxaana magaalada la soo galiyay malaayiin doolar oo been abuur ah, halka mashiinno iyo daawooyin lagu nadiifinayo lacago sharci darro ah.
Doorasho boob, xaraash, laaluush iyo awood sheegasho ah
Warar 8 December 2021 15:54
Soomaaliya oo wajahaysa xaalad bini’aadannimo oo halis ah
Warar 8 December 2021 15:48
Nidaamka Caddaalada Soomaaliya oo meel xun maraya
Warar 8 December 2021 12:35
Puntland oo Dagaal qarka u saaran
Farmaajo oo qaaday labadii tallaabo ee dalka burburisay
Xaashi iyo Guuleed oo ka hor yimid amar ka soo baxay FEIT
Halkuu marayaa qorshihii CQS kula wareegayeen amniga dalka?